I-Key to the Successful Twitter Marketing Strategy - Ukuzijwayeza kwe-Semalt
i-Twitter iyigugu le-SEO yokuthengisa ithuluzi kubasebenzisi abenza ama-social media marketing strategies. Noma yiliphi ibhizinisi lingathola inqubo yokusetha futhi isebenze umkhankaso wokuthengisa we-inthanethi ophumelelayo. Kubasebenzisi abaningi, i-Twitter ingenza inzuzo yewebhusayithi evela kumakhasimende avela kuwebhu. U-Nik Chaykovskiy, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, unikeza izindlela ezilandelayo zokuthola okuningi ku-Twitter:
Joyina izingxoxo. Ukujoyina izingxoxo ezikhona kungaba inguquko yangempela ohlelweni lakho lokuthengisa nge-Twitter - liftactiv eyes. Kungenzeka ukufaka izinhlobo eziningi zokuqukethwe kanye nokwenza izilaleli zihlanganyele emkhankasweni wokumaketha. Lesi sici sinomthelela ekusimweni kwewebhusayithi yakho kuma-SERP. Ungabamba umncintiswano futhi unikeze umqobi i-freebie. Ungakwazi futhi ukwethula umdwebo, ongenza abantu ngaphakathi niche yakho bahlanganyele newebhusayithi yakho isikhathi eside.
Sebenzisa amavidiyo nezithombe. Amavidiyo nezithombe zenza indlela eyingqayizivele kodwa ephumelelayo yokuletha okuqukethwe kumsebenzisi. Ngo-January 2017, i-Google ivuselele i-Algorithm yawo ye-Penguin. Ezinye izinguquko abantu abazenzayo zihlanganisa ukuzisebenzisa njengezinto ezijwayelekile, ezitholakalayo injini yokusesha ukukhomba. Ngaphezu kwalokho, izithombe zinikeza i-UX yewebhusayithi yakho noma ibhulogi, okwenza kube isici senombolo.
ukubuyisa ngokuhlakanipha. Inkinobho ye-Retweet ingaba usizo ikakhulukazi uma uzama ukuthumela okuthunyelwe. Qiniseka ukuthi wonke ama-retweet anamazwana akhiwe ngokuhambisana nawo. Lolu shintsho luletha ubuqiniso kuyo yonke inqubo yokuhweba kanye nokwenza abantu bahlanganyele nezinye izinto ezifanele ngaphakathi kwe-niche yakho.
Tfola abalandeli bakho abalulekile. Akuwona wonke umuntu othanda ikhasi lakho angaba njengeklayenti. Kwezinye izimo, abantu bakuthola ukubaluleka ukwenza abasebenzisi baxhumane namaphrofayela abo benze izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi isayithi sifinyelela imigomo yomsebenzisi. Abanye abalandeli banethuba lokuguqula amaklayenti kalula kanti abanye bangathatha isikhathi esiningi.
Hlanganisa izithameli ezilungile. Uma wenza i-tweet, abantu abaningi bangase babuyekeze noma babeke amazwana kulowo tweet. Kwezinye izimo, abantu abasebenzisa amawebhusayithi amaningi e-commerce banenkinga yokubhekana namathani ayi-DM avela ezingxenyeni eziningi zomkhankaso wokukhangisa. Kubalulekile ukuphendula izithameli ezilungile kuphela.
Kunezindlela eziningi abantu abangasebenzisa ukwenza i-Twitter marketing isu liphumelele. Okokuqala, umuntu angabhekana nobunzima obuningi lapho enza i-SEO. Ngenxa yalokho, abakwa-webmasters bakhetha ukufaka amanye amasu okuThuthukiswa koMphakathi ku-equation. I-Twitter ingayithuthukisa ezinye zezindlela ibhizinisi lakho elilanda ngayo amaklayenti. Ngendlela efanayo, kungase kube nezinye izici ezihileleke kulo lonke uhlelo lwe-tweeting kanye nendlela abantu abazenza ngayo inzuzo.